WinnersMan of the week
PredictionRules and Competition
Points of Users (Season)
Points of Users (Monthly)
Prediction All Result
ဂရတ်ဘေးလ်က သူနှင့် အသင်းဖော် ကစားသမား စီရိုနယ်လ်ဒိုတို့မှာ ပြိုင်ဘက်များ မဟုတ်ကြောင်း စီရိုနယ်လ်ဒိုမှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု ချီးမွမ်း အရည်အသွေးမြင့် လူငယ်ကစားသမားများကို စံချိန်တင် မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သော ဆောက်သမ်ပ်တန်အသင်းမှာ အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းများအတွက် စံနမူနာယူသင့်သည့် ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သည်
မန်ယူအသင်းသည် အသင်း၏ ကွင်းလယ်ကစားသမား မိုက်ကယ်ကာရစ်အား (2015) ခုနှစ် ဇွန်လ အထိ သက်တမ်းရှိ စာချုပ်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်
2014 ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ၌ တားမြစ်ဆေး သုံးစွဲခြင်းအား ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် ကစားသမားများ၏ သွေး၊ ဆီး နမူနာများကို စစ်ဆေးမည်
မိုက်ကယ်ကာရစ်သည် ဖနောင့်ကြော ဒဏ်ရာကြောင့် အနည်းဆုံး ရက်သတ္တပတ် (4) ပတ်မှ (6) ပတ်အထိ အနားယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်
ဥရုဂွေးအသင်းနှင့် ဂျော်ဒန်အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သည့် ပထမကျော့ပွဲစဉ်တွင် ဥရုဂွေးအသင်းသည် (5-0) ဂိုး ရလဒ်ဖြင့် နိုင်ပွဲ ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ဝင်ခွင့် ရရှိရန် ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး သေချာခဲ့ပြီ
ဂိုးသမား ဘီကိုဗစ်ဟာ ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ပီတာရှမိုက်ကယ် (အက်စ်တွန်ဗီလာ)၊ ဖရီဒယ်လ် (ဘလက်ဘန်း)၊ ရော်ဘင်ဆန် (စပါး)၊ တင်ဟောင်းဝပ် (အဲဗာတန်) တို့ပြီးနောက် ဂိုးသွင်းယူနိုင်သည့် ဂိုးသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်
မိုခရိုဆော့ဖ်ကုမ္ပဏီသည် စပိန်လာလီဂါကလပ် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း၏ အိမ်ကွင်း ဘာနေဗျူး အမည်အား ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ခွင့် ရရှိရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်
Winner Of Week (22)
AST - LIV
BUN - CPR
QPR - MNU
SWA - CHE
TOT - SUN
WHU - HUL
MNC - ARS
EVE - WBM
AAA - Winner A... A... A...
BBB - Winner B...B...B...
CCC- Winner C... C... C.... Welcome to ရွှေဘောလုံး Announcement
ရွှေဘောလုံး ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပမည်
ရွှေဘောလုံး ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား မကြာမီအချိန်တွင်း ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ရွှေဘောလုံး ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးကို အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရွှေဘောလုံးဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကဏ္ဍသစ်များအဖြစ် ဘောလုံးပွဲ လောင်းကြေးများ၊ ပရိတ်သတ်များ ကိုယ်တိုင် ရေးသားပေးပို့နိုင်သည့် ဆောင်းပါးများ စသည့် ကဏ္ဍသစ်များကိုလည်း တင်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဘောလုံးပွဲလောင်းကြေးများ ကဏ္ဍတွင် ဥရောပထိပ်တန်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲများ၏ လောင်းကြေးများနှင့်အတူ ရွှေဘောလုံးမှ အကြိုက်ဆုံးသော ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကို ရွေးချယ်ပြီး ကြေးဖွင့်လှစ်မှု၊ ကြေးအပြောင်းအလဲ၊ ထိုပွဲစဉ်နှင့်ပတ်သတ်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ သုံးသပ်ချက်များစသည့် အနေအထားများကို သုံးသပ်၍ ရွှေဘောလုံးပရိတ်သတ်များ အကျိုးရှိစေရန်အတွက် ရွေးချယ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပရိတ်သတ်များ ကိုယ်တိုင်ရေးသား ပေးပို့နိုင်သည့် ဆောင်းပါးကဏ္ဍ (Fans Post) တွင် ဘောလုံးအားကစားကို ဝါသနာပါသည့် ပရိတ်သတ်များအနေဖြင့် မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အကြောင်းအရာများကို ရေးသားပြီး ရွှေဘောလုံး၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာအီးမေးလ်သို့ ဦးစားပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ရွှေဘောလုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တွင် ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဏ္ဍတွင် LIKE အရေအတွက် အများဆုံး ရရှိသူတစ်ဦးအား ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များ ဆုချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (အသေးစိတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မကြာမီ ထပ်မံဖော်ပြပေးမည်)
ရွှေဘောလုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲတွင် အပတ်စဉ်ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲနှင့် လစဉ်ပြိုင်ပွဲများအတွက် ယခင်က ဆုကြေးငွေ သုံးသောင်း (30000) ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ်များကို ဆုကြေးငွေအဖြစ် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မကြာမီ ထမ်မံဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတစ်ပတ် အတွက် ခန့်မှန်းချက်အားလုံးအား ကြည့်ရှုရန်ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းများအား ကြည့်ရှုရန်
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအား ဘရာဇီးလ်မှ ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပရန် အစီအစဉ် မရှိ
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံ ဆာအိုပေါ်လိုမြို့ရှိ ကိုရင်သီယန်အရီနာကွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အဆောက်အဦးပြိုကျ ပျက်ဆီးခဲ့ပြီး အလုပ်သမား (2) ဦး သေဆုံးခဲ့ရာ အဆိုပါ အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာ အချိန်မီ ပြီးစီးရန် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနေသည်
ကမ္ဘာ့အဆင့် (13) အထိ ကျဆင်းခဲ့သည့် အင်္ဂလန်
နိုဝင်ဘာလ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင် ဘရာဇီးလ်၊ ပေါ်တူဂီတို့ အဆင့် (10) အတွင်း ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ အင်္ဂလန်အသင်းတို့မှာ အဆင့် (10) ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုလအတွင်း အဆင့် ရပ်တည်မှု၊ ရမှတ်အများဆုံး ရရှိခဲ့သည့် အသင်းမှာ ကျူးဘား၊
မန်စီးတီးအသင်းမှ ဂျိုးဟတ် ထွက်ခွာမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
ဂျိုးဟတ်သည် လာမည့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလတွင် အသင်းမှ ထွက်ခွာဖွယ် ရှိနေပြီး အခြားသော အသင်းတစ်သင်းသို့ အငှားဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ဖွယ် ရှိသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေသည်
လူတစ်ယောက်မှာ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးဥာဏ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံ အရာအားလုံးကိုတောင် ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ နယူတမ်၊ အိုင်းစတိုင်း၊ အက်ဒီဆမ်တို့ရဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်ကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဟာ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဟစ်တလာရဲ့ စိတ်ကူးဥာဏ်က နောက်ဆုံးတော့ ဆိုးဝါးမှုတွေ ဖြစ်လာစေပါတယ်။
ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော ဘောလုံးဒါဘီပွဲစဉ်ဟု ဆိုရာဝယ်…..
ဘောလုံးဒါဘီပွဲတွေဆိုရင် ပြိုင်ဘက်နှစ်သင်းရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ပုံတွေက ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်းထန်သလို နှစ်သင်းပရိတ်သတ်တွေကလည်း အစွန်းရောက်တဲ့ တရားလွန်အားပေးမှုများနဲ့ အားပေးတတ်ကြလို့ ကြမ်းတမ်းတတ်တဲ့ သဘောတွေလည်းရှိပါတယ်
မန်စီးတီး၏ အောင်မြင်မှုများအတွက် ဂိုးသွင်းစက် - အဂွေရို (W-8)
ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိဖို့ သွင်းဂိုးတွေ လိုအပ်နေမှုကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက် တိုက်စစ်မှူးကောင်း၊ ကစားသမားကောင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ လက်ရှိ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှာ အဂွေရိုအပြင် ဒီဇီကို၊ နီဂရီဒို၊ ဂျိုဗီတစ်တို့ ရှိနေပေမယ့် ဂိုးတွေအတွက် အဂွေရိုကပဲ အရေးကြီးဆုံးသော ကစားသမားအဖြစ် ရှိနေပါလိမ့်မယ်
မန်ယူအသင်း၏ ကြယ်ပွင့်သစ်- ဂျာနူဇာ (W-7)
လူငယ်တွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ အရေးကြီးဆုံးသော သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီက ယုံကြည်မှု ရရှိဖို့ ၊ သူတို့ကို ယုံကြည်မှုပေးဖို့ ဒါတွေက အရမ်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအချက်ကို လက်ခံပါတယ်။
Shwe Ball Lone Prediction
ရွှေဘောလုံး ခန့်မှန်းပြိုင်ပွဲအား 2014- 2015 ရာသီတွင် ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကဏ္ဍသစ်များနဲ့အတူ ဆုကြေးငွေ ချီးမြှင့်မည့် ပုံစံကို ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
1	Aston Villa Sunderland 2	Cardiff City Arsenal 3	Everton Stoke City 4	Norwich Crystal Palace 5	West Ham Fulham 6	Newcastle West Brom 7	Spur Man Utd 8	Hull City Liverpool 9	Chelsea Southampton 10	Man City Swansea Name Email *
Prediction winner poll
Moe Min (music...)
52% (188 votes)
Total votes: 362 အပတ်စဉ် ခန့်မှန်းချက်များ ကြည့်ရှုရန်.. Special Choice
Bookie (ဘော်ဒီ ) 1+50 Team A
(ဂိုးပေါင်း ) 3+40
Shweballlone အကြိုက်Team A (ဘော်ဒီ) (90%)ရွေးချယ်ရသည့် အကြောင်းအရင်း Week (13) Results
Aung Myint Hein
Ha Bi (phyumi….)
Moe Myint Thurein
myo min (nge lay)
Thant Zin 1
Nyan Zin Linn
* အခြားသော ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရမှတ်များကို ရာသီအနှစ်ချုပ် အမှတ်ပေးဇယားတွင် ကြည့်ရှူနိုင်ပါသည်။ Hosting Provider by Ejusthost
Design by Kyaw Zin
Copy Right ® All Right Reserved <?php print $site_name; ??>2012